(tonga teto avy amin'ny Bokin’i Isaia)
Fiadanana, araka ny Isaia 11.6-7, nataon'i William Strutt, taona 1896;
Ny Bokin’ i Isaia dia mitondra ny anaran’ i Isaia (na Izaia), mpaminany niaina tokony ho tamin’ ny taonjato faha-8 tal. J.K. Iray amin’ ireo mpaminany malazan’ i Israely i Isaia. Zanak’ i Amôsa, izay fianakaviana ambony tao Jerosalema, izy. Mponin’ i Jerosalema i Isaia. Niasa tamin’ ny antsasany faharoan’ ny taonjato faha-8 tal. J.K. izy, tamin’ ny fotoana izay nanombohan’ ny Asiriana nanafika matetika miankandrefana, fanafihana izay namaritra ny hoavin’ ny fanjakan’ i Israely sy ny an’ i Joda. Teo anelanelan’ ny taona 740 sy 700 tal. J.K. izany, indrindra fa tamin’ ny nanjakan’ i Ahaza (na Akaza) (mpanjakan' i Joda) tokony ho tamin’ ny taona 735 tal. J.K. sy ny zanany nandimby azy ary tamin’ ny andron’ ny mpanjaka Hezekia (na Ezekiasa) tokony ho teo anelanelan’ ny taona 715 sy 710.
Ny toko voalohany hatramin' ny haha-39 dia tokony ho nosoratana indrindraindrindra tamin' ny andron' i Isaia. Io ampahany voalohany io no atao hoe Isaia Voalohany na Prôtô-Isaia, izay heverina fa nosoratan’ ny mpaminany Isaia ho an’ ny vahoaka Jiosy sy ho an’ ireo firenena manodidina.
Ny ampahany faharoa, atao hoe Isaia Faharoa na Deoterô-Isaia, toko faha-40 hatramin’ ny toko faha-55, dia nosoratana ho an’ ireo Jiosy nasesitany tany Babilôna, tokony ho teo antenantenan’ ny taonjato faha-6 tal. J.K.
Hatramin’ ny fikarohana nataon’ i Claus Wintermann izay nanamafy ny petrakevitr’ i Bernhard Duhm (taona 1892), ireo manampahaizana momba ny Baiboly dia miresaka ny amin’ i Isaia Fahatelo na Tritô-Isaia mba hanondroany ny fizaràna fahatelo izay mahafaoka ny toko faha-56 hatramin’ ny faha-66. Ity fizaràna farany ity dia miresaka ny amin’ ny Jiosy taorian’ ny fahababoana.
Ny toko 1 – 6 dia misy faminaniana momba an’ i Joda sy i Jerosalema. I Isaia dia manameloka ny fahotan’ i Jerosalema tamin’ ny nanjakan’ i Jotama sy tamin’ ny nanjakan’ i Ahaza (na Akaza) sady manambara mialoha ny famaizana hahazo azy ireo (toko faha-2 hatramin’ ny faha-5), dia ny hakan’ ny Asiriana ny tany (Isa. 5.26-30). Mamelatra teôlôjian’ ny Tantara i Isaia ka manambara fa manatanteraka ny fikasany amin’ ny alalan’ ny tantaran’ ny olombelona sady mamonjy ireo izay mino azy Andrianamitra. Ny vahoakan’ i Israely dia hofaizina noho ireo fahotana nataony nefa misy vitsivitsy izay hovonjena sady ho velona sambatra eo ambanin’ ny lalàn’ ny taranak’ i Jese izay hanao ny marina.
Ny toko faha-28 – 33 dia ahitana faminaniana fanozonana sy fampanantenana fanavotana. Miresaka ny amin’ ny ezaka nataon’ ny Fanjakan’ i Joda mba hahazo fanohanana hanoherana an’ i Asiria amin’ ny alalan’ ny fiarahany amin’ i Ejipta ny boky eto (Isa. 30.1-7; 31.1-3). Ny mpaminany dia nampitandrina ny mpanjakan' i Joda fa ny ezaka rehetra kasainy hatao handresena an’ i Asiria dia tsy hahomby satria niala tamin’ ny finoana ny fanavotan’ Andriamanitra ny vahoaka (Isa. 28.14-22; 30.1-17). Ireo toko ireo dia manameloka an’ i Samaria sy i Asiria, nefa manao teny fampiononana: fampanantenana fahasambarana ho avy ao amin’ ny firenena hatsangana indray sady ho entin’ ny mpanjaka izay marina sy tia fandriam-pahalemana. Ny ankamaroan’ ireo andalana momba ny fampiononana dia natao tokony ho tamin’ ny fotoana taty aoriana kokoa, taorian’ ny fotoan’ ny Fahababoana.
Miompana amin’ i Siôna (na Ziona) izay ivon’ ny fivahinianana ho an’ ny firenena rehetra (toko faha-60 – 62) ity fizarana farany ity. Izany dia maneho fomba fijery mahafaoka izao tontolo izao izay hita koa ao amin’ ny Isa. 56.1-8 sy Isa. 66.18-24. Maro ireo lohahevitra efa hita tany aloha no iverenan' ny mpanoratra aseho amin’ ny fomba hafa ato amin’ ity fizaràna ity. Izany dia momba ny fandresen’ i Jerosalema any am-parany.
Ny Fahitan'i Isaia, nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860.
Ny tonon-kira ao amin’ ny toko faha-11 dia mety ho tovana natao mba hankalazàna an’ i Josia (na Josiasa).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Isaia&oldid=1036783"
Voaova farany tamin'ny 30 Aogositra 2021 amin'ny 10:04 ity pejy ity.